Ciidamada X.D.S ee gobolka Hiiraan oo markii ugu horeysay loogu deeqay gaadiid dagaal – SomaliaOne News Network
Ciidamada X.D.S ee gobolka Hiiraan oo markii ugu horeysay loogu deeqay gaadiid dagaal
Oct 17, 2016 WARARKA
By Hussein Nur The Tenth Battalion of the Somali National Army (SNA) in Hiiraan region, Central Somalia.
Beledweyne, Gobolka Hiiraan, Soomaaliya ( SOMALIAONE.NET) – War ka soo baxay Taliska Ciidanka Milatariga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee fadhigoodu yahay Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidankaasi markii ugu horeysay tan iyo qaran burburkii dalka la gaarsiiyay gaadiid dagaal.
Ciidanka Milatariga ee ku sugan Beledweyne oo ah kuwa qaba tababarro milatari oo ay ka heleen wadamada Djibouti iyo Ethiopia ayaa gudoomay illaa iyo 15 gaadiid nooca dagaalka iyo xamuulka .
Colenel Tawane Axmed Gurey oo la hadlay warbaahinta ayaa soo bandhigay ku dhawaad 15 gaadiid nooca dagaalka ah ee ciidamada ay isticmaalaan iyo hub ciidan, waxaana uu sheegay in dhowaan uu bilaaban doono howlgal ka dhan ah Ururka Al Shabaab.
Tawane Axmed Gurey oo ah Taliyaha Guutada 10-aad ee ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed (XDS) ee fadhigeedu yahay Gobolka Hiiraan, ayaa waxa uu xusay in ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya, qaybta Gobolka Hiiraan ee Guutada 10-aad hadda inay yihiin ciidan heysta agab ku filan oo dagaal, weerar millateri ku qaadi kara Al Shabaab.
“Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya guutada 10-aad waxa ay ku jiraan diyaargarow, Diyaar garowgaasi oo looga gol leeyhay in dalka lagu difaaco, gaar ahaan Gobolkaan oo mas’uuliyadiisa ay na saaran tahay oo hadda meelo ciidamada ay deganayaaen ay isaga soo guureen, waxaan rabnaa inaan buuxinno meelahaasi oo aan difaacno Magaalooyinka waaweyn, maadaama xilligan loo diyaargaroobayo arrimaha doorashooyinka.” Ayuu yiri Col.Tawane.
Taliyaha ciidamada Xooga dalka ee Gobolka Hiiraan ayaa ku ammaanay ciidamada Gobolkaasi ku sugan inay yihiin kuwa geesiyaal ah oo awood u leh difaacidda Gobolka Hiiraan iyo Magaallooyinka ay ka dhacayaan Doorashooyinka.
“Qalab ciidan waan keennay, howshaas aan soo sheegay ayaa lagu qabanayaa, waad arkeyseen indhihiina ayaad ku arkeyseen, markii hore gaadiid xumaa na haysay Dowladda dhexe ayuu nooga yimid Taliska ciidanka Xooga dalka ayaana na siiyay” Ayuu hadalkiisa sii raaciyay Col. Tawane Axmed Gurey.
Ciidamada Ethiopia ayaa dhowaan ka baxay deegaanno ka tirsan Gobolka Hiiraan, taasi oo cabsi gelisay dadka ku nool deegaano ka tirsan gobolkaasi oo ah in dagaalyahannada kooxda Al Shabaab ay u ruqaansadaan dhanka degmooyinka gobolkaasi ee ciidanka Milatariga dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Djibouti ay sugaan amnigooda.
Beledweyne, Colenel Tawane Axmed Gurey, Djibouti, Ethiopia, gobolka Hiiraan, Soomaaliya, Xoogga dalka Soomaaliyeed (XDS) tweet Loading...
Beesha caalamka oo walaac ka muujisay in xubno taariikhda ku leh colaado iyo dembiyo loo soo magacaabo baarlamaanka
Read previous post:Beesha caalamka oo walaac ka muujisay in xubno taariikhda ku leh colaado iyo dembiyo loo soo magacaabo baarlamaankaMuqdisho, Soomaaliya (SOMALIAONE.NET) - Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub, Urur-Goboleedka IGAD, Itoobiya, Talyaaniga, Sweden, Boqortooyada Midowday (UK) iyo Dowladda...Close